अब के होलाआलियाको फिल्मी करियर ? – Khabar PatrikaNp
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपूतले ज्यान दिएपछि उनका प्रशंसकसहित थुप्रै मानिसहरु रिसले भरिए र उनीहरुमध्ये धेरैको यो मान्यता छ कि सुशान्त नपोटिजमका शिकार भएका छन् । ती मानिसहरु यस्ता व्यक्तिविरुद्ध उत्रिए जो आफ्ना पिताको नाममा फिल्म इन्डष्ट्रिमा आएका छन् । यीमध्ये एक आलिया भट्ट पनि छिन् ।
आलियासँग रिसाउनुको अर्को कारण यो पनि हो कि रिया चक्रवर्ती र आलियाका पिता महेश भट्ट एक–अर्कालाई राम्रोसँग चिन्छन् र रिया लगातार महेश भट्टसँग सल्लाह लिइरहन्छिन् । यी दुईको ह्वाट्सएप च्याट पनि निकै भाइरल भइरहेको छ । यतिबेला रियामाथि विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ । तसर्थ महेश भट्टको आगामी फिल्म ‘सडक टु’ को ट्रेलरले युट्युबमा बेस्सरी डिस्लाइक पाएको छ जसमा आलिया भट्ट मुख्य भूमिकामा छिन् ।
आलिया भट्ट पनि निशानामा छिन् र उनले पनि सोसल मिडियामा अत्यधिक नकारात्मक टिप्पणीको सामना गर्नु परिरहेको छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार उनलाई लिएर फिल्म बनाउने योजना बुनिरहेका निर्माता–निर्देशक पनि अब आफ्नो निर्णयमाथि नयाँ ढङ्गले विचार गरिरहेका छन् ।
आमा–बुवामार्फत् बलिउडमा प्रवेश भएका कलाकार र निर्देशकलाई बोयकट गर्ने कुरा लगातार उठिरहेका बेला करोडौं रकम जोखिममा नपार्न निर्माता–निर्देशकले विचार गरिरहेको बताइएको छ । आलियाको ब्रह्मास्त्र र गंगूबाई काठियावाड रिलिज हुने तयारीमा छ । यस बाहेक सडक टु ओटीटी प्लेटफर्ममा २८ अगस्टमा रिलिज हुनेछ ।
Prevभुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम !
Nextसच्चा मनले शेयर गर्दै दर्शन गर्नुहोस :जोडी मिलाउने र निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेव !
मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी फेर्ने विषयमा बहस अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि तयार रहन शीर्ष नेताको फोन
पैसा हराए कमाउन सकिन्छ तर, संस्कृति हराए सर्वस्व हराउछ, तपाईं हराउनुहुन्छ ॐ लेखेर एक Share गर्नुस
जनकपुरमा ४ बच्चा जन्माएकी आमाको निधन..!
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29811)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15630)